Chris Ward inyanzvi yekuchengetedza cyber uyo anounza yepamusoro-soro yekudzidzisa uye cybersecurity kubvunza masevhisi kumakambani, masangano uye tertiary intuitions. Iye zvino mudiwa akavimbika naCarnegie Mellon University ari kuendesa makosi epamusoro muAustralia, New Zealand, Fiji, uye America. Asati aumba kambani yake, aive New Zealand Defence Force inotungamira kuCyber Security uye Ruzivo Kuchengetedzwa. Chris anga ariwo sachigaro wemakomiti maviri epamusoro eInternet maKomiti. Chris akatamira kuNZDF kubva kuDirector of Defense Security mukati meUK Ministry of Defense. Chris aive zvakare chipangamazano mukuru kubva kuUK MOD kuenda kuNATO CERT.
Chris akagadzira nekutarisira Computer Security Chiitiko Chekupindura Matimu (CSIRT's) kuUK neNZ. Iye zvakare Software Software Institute (SEI) murairidzi paCarnegie Mellon University inogara muUnited States uye anonunura SEI kudzidziswa muNew Zealand neAustralia achibatana neVictoria University yeWellington.
Chris achangobva kunyora uye kudzidzisa dhipatimendi repashure pedzidzo yekuchengetedza cyber kweYunivhesiti yeSouth Pacific muFiji.
Chris parizvino ari Managing Director uye muvambi weCyber365.
Anoti, "chiono chake ndechekupa dzidziso, maturusi, uye ruzivo rwekupa masimba emukati nekuchengetedzwa kwesangano."
Cyber365 yakazvarwa kunze kwekuziva kuti masangano mudunhu rese reAsia Pacific airwa nematambudziko akafanana eindasitiri ane chekuita neCyber Security uye nzira yakanakisa yekusangana nematambudziko aya musoro-on .
Izvo zvinoonekwa kumakambani nhasi ndezvekuti kusaita chinhu haisisiri mhinduro. Ivo vanofanirwa kuchengetedza yavo bhizinesi midziyo, yehungwaru pfuma, uye vatengi kana vachizogara mubhizinesi uye chengetedza vatengi vavo kuvimbika uye kuvimba.
Nekuda kweizvozvo, Cyber365 yakagadzira bhizinesi-centric modhi nechinangwa chega chekushanda nemasangano kuwana uye kuchengetedza yakasimba yeCyber Security kwezvivakwa uchishandisa zvinotevera zvitatu zveCyber365 zvekuita;
Mutengi Akanangana Kudzidziswa
Nekuita neCyber365, masangano ave kugona kugamuchira kubvunzana kwakakodzera uye kudzidziswa kuti vaone 'maitiro akanakisa' eCyber Security matanho aripo ekuchengetedza zviitiko zvisingafanoonekwi kana nemaune zviito zvisiri pamutemo.
Isu tinotora ruzivo rwemunhu kubva kwauri, kusanganisira ruzivo nezve yako:
kubhadhara kana kutenga ruzivo
Tinounganidza ruzivo rwako pachako ku:
gamuchira kubhadhara uye unyore iwe kosi.
Isu tinochengeta ruzivo rwako rwakachengeteka nekurichengeta mumafaira akanyorwa uye kungobvumira vamwe vashandi kuti vawane.
Une mvumo yekukumbira kopi yemhando ipi neipi yemunhu iwe yatinobata pamusoro pako uye nekukumbira kuti igadziriswe kana iwe uchifunga kuti haina kunaka.
Kana iwe uchida kukumbira kopi yemashoko ako kana kuti igadziriswe, tapota taura nesu pa contact@cyber365.co